DHEGEYSO-Dagaal khasaare geystey oo dhexmaray ciidanka Puntland iyo Galmudug. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Dagaal khasaare geystey oo dhexmaray ciidanka Puntland iyo Galmudug.
Diseembar 23, 2016 8:38 g 0
Galkacyo, Dec 24 2016- Inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa kudhimatay 8 kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaarey dagaal gelinkii dambe ee shalay magaalada Galkacyo ku dhexmaray ciidamada Puntland iyo Galmudug.
Dagaalkaan ayaa cabsi ku beeray shacabka magaalada Galkacyo oo ka walaacsan in dagaal lamid ah kii hore ee uu dhexmari ciidanka labada dhinac, iyadoona gudiyada labada dhinac kuhowlan yihiin fulinta heshiisyadii lagalay.
Gabdhaha maamulada Soomaaliya oo tartan kubadda kolayga ah Garoowe uga socdo.